Ireo lahatsoratra be mpamaky indrindra teto amin’ny Global Voices taona 2008 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2009 20:12 GMT
Manakaiky ny 3 000 000 ny isan'ny nitsidika ny Global Voices tamin'ny 2008. Miakatra be ny mpitsidika amin'ny fotoanan'ny ady na voin-janahary- ary matetika mpamaky ivelan'ny fireneny manaraka ny zavamisy avy any amin'ny firenena nihaviany, na olona tsotra miezaka ny hahazo ny fandehan'ny raharaha avy amin'ny fomba fijery anatiny izy ireny.
Efa namoaka ny tamberin'ny 2008 any amin'ny faritra misy azy ny mpamoaka vaovao isam-paritry ny Global Voices. Azonao vakiana ny takelaka manokana Best of 2008, ary afaka ny manampy ny lahatsoratra ankafizinao ao amin'ny sarintanin'ny mpamaky amin'ny Google map aza ianao. Efa namoaka ny fehifehin'ny zavabita ny tale mpanantanteraky ny Global Voices, Ivan Sigal. Ary fomba tsotra indrindra ahafantarana izay tian'izao tontolo izao matetika ny tahirin-kevitra.
Tianao ve ny hahafantatra ny lahatsoratra be mpamaky indrindra tamin'iny taona 2008 iny?
Shina – Tibet, Lalao Olaimpika, Horohorontany
Tahaka ny tamin'ny 2007 ihany, dia ny lahatsoratra mikasika an'i Shina no be mpamaky indrindra.
Amin'ny maha-mpitati-baovao tohanan'i Reuters anay tamin'ny vaovaon'ny lalao olaimpika, dia nanoratra ity lahatsoratra ity i John Kennedy tamin'ny volana Mey ka nihoatra ny 700 ny fanehoan-kevitra taorian'ny firotsahana an-dalambe nataon'ny mpanohana an'i Tibet (ny fizakantenany) (sy ny mpanohitra izany fizakantena izany) tany Etazonia. Nahazo fanakianana mivaivay indrindra an-tserasera ny Shinoavavy tanora mpianatra, Wang Qianyuan.
Variraraka tokoa ny resaka noho ny tsy fifankahazoan-kevitra momba an'i Tbet nandritra ny volana marsa sy avrily, ary na dia ity lahatsoratra fohy navoakan'i Oiwan Lam ity aza dia efa nampiady hevitra ka nahatonga ny maro tamin'ny mpamaham-bolongana Shinoa namaly bontana ny fomba fitateran'ny hainy aman-jery tandrefana ny vaovao.
Tamin'ny volana Mey, Tsy ampy adin'ny roa taorian'ny horohorontany tany Shina faritanin'i Sichuan, i John Kennedy dia efa nahavoaka lahatsoratra miaraka amin'ny sary sy lahatsary navoakan'olo-tsotra izay nanohizany namoaka ny vaovao farany nandritra ny ora sy ny andro manaraka. Iray tamin'ny lahatsoratra maro nivoaka teto amin'ny Global Voices nitantara ny horohorontany sy ny fiantraikany.
Japan – Google Street View
Anisan'ny be mpamaky ihany koa ny dikandahatsoratra nosoratan'i Osamu Higuchi avy tamin'ny teny japoney ho amin'ny teny anglisy nataon'i Chris Salzberg mitantara ny fipatitahan-kolontsaina Japoney tamn'ny fampidirana ny Google Street View, famoahana saripika an-tserasera ny fiainana sy ny endri-tanàna jerena avy eny an-dalambe. Notsinjarazaraina teny anglisy, Japoney ary shinoa moa ity lahatsoratra ity, ary lasa loharanom-baovaon'ny gazety mahazatra avy eo. Maro ny famoaham-baovao farany mikasika ity tantara ity navoakan'ny ekipa Japoney teto amin'ny Global Voices.
Adin'i Ossetia atsimo sy Rosia tamin'i Georgia
Tratran'ny tampoka ny famoaham-baovao iraisam-pirenena rehefa nipoaka ny gidragidra teo amin'ny Georgia sy Rosia mikasika an'i Ossetia atsimo tamin'ny volana Aogositra. Haingana dia haingana ny namoahan'i Onnik Krikorian teto amin'ny Global Voices ny vaovao avy tamin'ny bolongana tany amin'ny faritra raha mbola vao mikasa ho any ny ankamaroan'ny mpanao gazety, ary dia nahazo fankasitrahana avy tamin'i New York Times, CNN, Reuters, ary ny hafa ry Veronica Khokhlova, Elia Varela Serra sy izay tsy voatanisa avy eto amin'ny Global Voices izay nanampy be dia be tamin'ny fitaterana ny vaovaon'ny ady tamin'ny alalan'ny fampitam-baovaon'olotsotra.
India – Fanafihana an'i Bombay
Fa ny tena nahazoanay mpamaky betsaka indrindra nanditra ny taona dia ny fitambarana lahatsoratra miresaka ny Fanafihan'ny mpampihorohoro an'i Bombay, India tamin'ny volana Novambra. Neha Viswanathan teto amin'ny Global Voices no anisan'ny voalohany indrindra nandrohy saripikan'olotsotra avy any Bombay ora vitsy monja taorian'ny fanafihana, ary nitohy ny fitantarana nandraisan'i Rezwan, Awab Alvi, Farhan Janjua ary ny ekipan'i Azia atsimo anjara.
Fankasitrahana ny rehetra
Maro dia maro ny mpanoratra sy ny tantara mendrika ny holazaina nivoaka tamin'iny taona 2008 iny (tokony hanome taratra ny fiezahan'ny tsirairay ny Special Coverage section). Miankina amin'ny lahatsoratra avoakan'ny mpanoratra sy mpandika teny manerantany mihoatra ny 150 isan'andro ny Global Voices – ary tahaka izany ihany koa miankina amin'ny mpamaham-bolongana an'arivony manerantany mampita ny eritreriny sy ny traikefany isan'andro hovakian'ny besinimaro. Isaorana ianao mpamaky miara-dalana aminay, maneho ny hevitrao , misoratra anarana handray amin'ny mailaka (subscribing) ny lahatsoratra ary manao fanampiana.
Tratry ny taona vaovao, ary mazotoa mamaky lahatsoratra!
Indonezia 1 herinandro izay
Fahalalahàna miteny 19 Avrily 2022